Isifundo se-Izixazululo Zendawo Eyingozi
Amathuluzi azokusiza ukukhulisa ukuzethemba kwakho kanye nekhono akho okulawula imvelo yakho.
Siphila ezweni eliyingozi, indawo eyingozi. Bukela izindaba zethelevishini noma ufunde iphephandaba lakho lansuku zonke futhi ubhekene nokudla kwansuku zonke kokuphanga, ukudlwengula, izibhelu, ukubulala, imililo, ukuzamazama komhlaba, izikhukhula kanye namafamines.
Ingabe uzithola uphazamiseka ngokwenzeka eduze kwakho? Ingabe uzizwa ungenalusizo, uhluleka ukulawula le micimbi? Ingabe ngezinye izikhathi uzizwa wesaba?
Kulesi sifundo, u-L. Ron Hubbard usabalalisa lesisimo semvelo esiyingozi, enikeza izindlela ezingeke zikusize kuphela ukunqoba ukwesaba kwakho, kepha zikuvumela ukuthi usize abanye. Isetshenziswe ngezinga elibanzi, lolulwazi luletha ithonya elikhulu lokuthoba futhi lwenze abantu bakwazi ukuphila izimpilo ezijabulisayo. Kusetshenziswe esikalini ngasinye—nguwe—kuzothuthukisa izimpilo zomndeni wakho, abangane kanye ne-Associates.
Amahora amathathu kuya kwamane. Kodwa ke, ungasenza le sifundo ngejubane lakho. Ngamanye amagama, akwanele. Isifundo lesi siyinsizakalo yethu kuwe, mahhala.
Incwajana Izixazululo Zendawo Eyingozi
Lapho sekuqediwe Isifundo se-Izixazululo Zendawo Eyingozi, uzothola isitifiketi nge-email.
“Kwangimangaza ukungithobisa ulwazi enganginalo kulesi sifundo kimi. Bengihlala ngikhathazeka ngezindaba nangalokho engikufunde ephepheni. Ukufunda obekulesi sifundo nokusebenzisa izindlela zokunciphisa usongo, ngilethe ngempumelelo kimina nakumndeni wami. Ngisebenzisa imininingwane evela esigabeni se-"Confront" nsuku zonke emsebenzini futhi abantu bamangazwa ngokuphelele yikhono lami lokusingatha umthwalo wami womsebenzi.
“Lento ibaluleke kakhulu. Ngingancoma ukuthi lolu lwazi lusatshalaliswe kabanzi. Kwenze impilo yami yaba ngcono kaningi ngendlela ebengiyisebenzisa ngayo futhi ngiyazi ukuthi izobenzela nabanye okufanayo!”
“Kuyangimangaza ukuthi zingakanani‘ izinto ’ezikhona ngaphandle ezitshela abantu ukuthi kufanele bazizwe kanjani. Izindaba kumabonakude nokuphrintiwe zigcwele izindaba ‘ezesabekayo,’ ezenza abantu bazizwe besaba futhi bedabukile.
“Ngithathe izeluleko ezibhalwe kule ncwajana futhi bengingakafundi iphephandaba noma ngibuke izindaba kumabonakude isonto lonke, futhi kuyamangalisa! Selokhu ngaqala lo ‘mzamo,’ ngijabule ngokwengeziwe futhi empeleni ngilale kangcono futhi angikaze ngicindezeleke. Ngaphambi kokuba ngiqale, ngangifunda amaphephandaba amabili noma amathathu ngosuku, futhi isiteshi sami sikamabonakude sasihlala ezindabeni ze-network usuku lonke. Ungathi ngiyisidina sezindaba—ngangicindezelekile, ngingenawo umdlandla futhi ngingalali kahle.
“Manje esikhundleni sokufunda leli phepha, ngifunda okuthile kwi-Scientology noma ku-Dianetics, noma okuthile okwakha umoya wami. Ngokuya kumabonakude, angiyikhanyisi ngezikhathi zasemini, nakusihlwa, ngibuka izinhlelo zami engizithandayo, ngaphandle kwalo lonke uhlobo lwezindaba!
“Angikaze ngiqaphele ukuthi lezi zindaba ezimbi zingithinte kanjani, futhi manje ngizizwa nginamandla futhi ngigcwele impilo!
“Ngiyabonga Scientology no-L. Ron Hubbard, umhlaba udinga ubuhlakani benu. Ngizofunda kabanzi, ukuze ngisize abantu—ningathembela kimi.”